3Cl2 + 16 KOH + 2CrCl3 → 8H2O + 2KCl + 2K2Crown4
koloriin potassium hydroxide chromium (iii) chloride biyaha chloride potassium
3 16 2 8 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3Cl2 + 16 KOH + 2ccl3 H 8H2O + 2KCl + 2K2Crown4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Cl2 (chlorine) ay la falgasho KOH (potassium hydroxide) oo la falgasha CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo KCl (potassium chloride) iyo K2CrO4 ()?
Dhacdada ka dib Cl2 (chlorine) waxay la falgashaa KOH (potassium hydroxide) waxay la falgashaa CrCl3 (chromium(iii) chloride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga K2CrO4, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3Cl2 + 16 KOH + 2ccl3 H 8H2O + 2KCl + 2K2Crown4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KCl (chromium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KCl (potassium chloride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K2CrO4 (chromium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2CrO4 () badeecad ahaan?
3H2O + 3Na2CO3 + 2CrCl3 → 6NaCl + 2Cr (OH)3 + 3CO2
biyaha kaarboon Sodium kaarboon chromium (iii) chloride chloride sodium carbon dioxide
3 3 2 6 2 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3H2O + 3Na2CO3 + 2ccl3 → 6NaCl + 2Cr (OH)3 + 3CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2CO3 (sodium carbonate) ka falcelisa CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaCl (sodium chloride) iyo Cr (OH) 3 () iyo CO2 (carbon dioxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2CO3 (sodium carbonate) waxay la falgashaa CrCl3 (chromium(iii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3H2O + 3Na2CO3 + 2ccl3 → 6NaCl + 2Cr (OH)3 + 3CO2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (chromium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
6H2O + 3Na2S + 2CrCl3 → 3H2S + 6NaCl + 2Cr (OH)3
biyaha sulfide sodium chromium (iii) chloride hydrogen sulfide chloride sodium
6 3 2 3 6 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6H2O + 3Na2S + 2ccl3 H 3H2S + 6NaCl + 2Cr (OH)3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2S (sodium sulfide) oo la falgala CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2S (hydrogen sulfide) iyo NaCl (sodium chloride) iyo Cr (OH) 3 ()?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2S (sodium sulfide) waxay ka falcelisaa CrCl3 (chromium(iii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6H2O + 3Na2S + 2ccl3 H 3H2S + 6NaCl + 2Cr (OH)3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2S (chromium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2S (hydrogen sulfide) alaab ahaan?
3H2O2 + 10 KOH + 2CrCl3 → 8H2O + 6KCl + 2K2Crown4
hydrogen peroxide potassium hydroxide chromium (iii) chloride biyaha chloride potassium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3H2O2 + 10 KOH + 2ccl3 H 8H2O + 6KCl + 2K2Crown4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O2 (hydrogen peroxide) waxay la falgashaa KOH (potassium hydroxide) oo la falgala CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Dhacdada ka dib H2O2 (hydrogen peroxide) waxay la falgashaa KOH (potassium hydroxide) waxay la falgashaa CrCl3 (chromium(iii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3H2O2 + 10 KOH + 2ccl3 H 8H2O + 6KCl + 2K2Crown4
3Br2 + 16NaOH + 2CrCl3 → 8H2O + 6NaCl + 2Na2Crown4 + 6NaBr
bromin sodium hydroxide chromium (iii) chloride biyaha chloride sodium Chromate sodium; Chromate sodium (VI); Milixda cusbada loo yaqaan 'chromic acid' Bromide sodium
3 16 2 8 6 2 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3Br2 + 16NaOH + 2ccl3 H 8H2O + 6NaCl + 2Na2Crown4 + 6NaBr
Waa maxay xaaladda falcelinta Br2 (bromine) ee NaOH (sodium hydroxide) kaga falcelisa CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NaCl (sodium chloride) iyo Na2CrO4 (Sodium chromate; Sodium chromate (VI); Chromic acid disodium cusbo) iyo NaBr (sodium bromide)?
Dhacdada ka dib Br2 (bromine) waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa CrCl3 (chromium(iii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3Br2 + 16NaOH + 2ccl3 H 8H2O + 6NaCl + 2Na2Crown4 + 6NaBr
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NaBr (chromium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaBr (sodium bromide) badeecad ahaan?